Mkpado: socialtv | Martech Zone
Anyị dere banyere ọdịnihu nke Social Television, mana nke bụ eziokwu bụ na ihuenyo nke abụọ adịlarị. Na mpụga ịga ihe nkiri, mgbe telivishọn m nọ n'ụlọ, enwere m laptọọpụ, mbadamba nkume ma ọ bụ iPhone m na njikere mgbe niile. A abụọ na ihuenyo bụ eke m… na ọ na-aghọ mainstream onye ọ bụla ọzọ, oke! Na-agbanwe Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi na Ntinye Ngwaahịa Kedu ka nke a si agbanwe otu anyị si ere ahịa? Ọ dị mma maka otu,
Wenezde, August 15, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Teknụzụ vidiyo na-agbago… site na retina ngosipụta, na nnukwu ngebichi, na 3D, AppleTV, Google TV… ndị mmadụ na-ekerịta ma na-eri oke vidiyo nke vidiyo karịa na akụkọ ntolite. Agbakwunye na mgbagwoju anya bụ ihuenyo nke abụọ - iji tebụl ma ọ bụ ekwentị mkparịta ụka mgbe ị na-ekiri telivishọn. Nke a bụ ọbịbịa nke SocialTV. Ọ bụ ezie na ikiri telivishọn ọdịnala na-ebelata, SocialTV na-egosi ọtụtụ nkwa. SocialTV na-abawanye nlele, na-enyere nkwado na ọbụna ịnya ụgbọ ala
Fired: MyBlogLog na BlogCatalog Wijetị
Tọzdee, Machị 27, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Maka ndị gị kemgbe nke na - agụ akwụkwọ ogologo oge, ị ga - achọpụta na ewepụrụ wijetị MyBlogLog na BlogCatalog. M gbalịrị iwepu ha ruo oge ụfọdụ. Enwere m obi ụtọ ịhụ ihu nke ndị folks na-eleta blog m mgbe mgbe - ọ mere ka ndị na-agụ ya yie ndị ezigbo mmadụ karịa stats na Google Analytics. M mere a zuru analysis nke ọ bụla isi iyi na otú ha chụpụrụ okporo ụzọ m na saịtị nakwa